कसरी चिन्ने सेक्स गरेका र नगरेका महिला ? - AJAMBARI
२ असार,२०७६0113
१ असार,२०७६0326
१ असार,२०७६ 326 0
एजेन्सी — महिलाहरु आफैमा प्राकृति रुपमा नै सुन्दर हुन्छन् । उहीहरुको सुन्दरताको सदाबहार तारिफ नै हुन्छ । तर पुरुषको तुलनामा महिलाको शारीरिक बिहे लगत्तै नै परिवर्तन भइहाल्छ ।
के कारण छ ? सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्स का सोधकर्ताले हालै गरेको अध्ययनका अनुसार नियमित सेक्स गर्ने महिलाको शारीरिक बनावट केही मात्रामा परिवर्तन भए पनि एक दिनमा नै पटक पटक सहवासमा लिप्त बन्ने महिलाहरुको नितम्ब अर्थात हिप फुलेर ठूलो हुने गरेको पाइएको छ ।
अन्तरापष्ट्रय मिडियाका अनुसार यो सर्वेका लागि महिलाहरुको हिपको सबै भन्दा ठुलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइयो ।
यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक पटक यौन सम्बन्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको भन्दा बढी थियो । यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् ।
जसको हिप ठुलो छ उनिहरुलाइ गर्भवती हुदा खासै समस्या नहुने भन्ने अध्ययनले देखाएको बताईन्छ ।
२ माघ,२०७५0186
२ फाल्गुन,२०७४0652
६ फाल्गुन,२०७४0629
३ फाल्गुन,२०७४0529
५ फाल्गुन,२०७५0286
मैले गाउँ छोडेपछि.. गायक केबी भन्छन् - जहाँ दुःख हुन्छ...
७ बैशाख,२०७६0176
जुन काम गर्दा खुशि भईन्छ त्यसैमा नै लागी पर्यो भने त्यो जस्तो सन्तुष्टि मिल्ने ठाउँ...